FANTARO ARY APETRAHO AO ANATY WINDOWS NY CODEC AUDIO & VIDEO TSY HITA - MALEMY
Fantaro ary apetraho ao anaty Windows ny Codec Audio & Video tsy hita
Mientanentana daholo ianareo hilalao sarimihetsika izay alaina rehefa avy niandry nandritra ny ora maro fa raha vao voatsindry ny bokotra filalaovana dia tsy milalao ilay sarimihetsika ary efijery mainty ihany no miseho na tsy misy feo? Na amin'ny tranga ratsy indrindra dia hiatrika hafatra diso ianao Takiana codec hilalao ity rakitra ity . Ny antony lehibe aorian'ity olana ity dia ny tsy fahitana ilay codec audio na video amin'ny rafitrao. Fa inona avy ireo codecs ireo? Ary ahoana no ahafahanao mametraka iray amin'ny rafitrao? Aza manahy amin'ity toro-lalana ity fa hamaly ny zava-drehetra izahay, araho fotsiny ny fanarahana.
Inona ireo Codecs?
Ny codec izay midika hoe coder-decoder dia sombin-kaody na fitaovana enti-miasa ampiasaina amin'ny famoretana ny data mba hahafahana mampita azy ary koa mamoaka ny angon-drakitra voaray. Rehefa tsy misokatra amin'ny rafitrao ny rakitra audio na horonan-tsary ary ny hany hitanao dia efijery mainty na tsy misy feo fampandrenesana na sary manjavozavo, ny antony lehibe aorian'io dia mety ho ilay codec tsy hita.
Misy rindrambaiko maromaro izay haneho ny codec napetraka ao amin'ny rafitranao. Azonao atao koa ny mijery ny codecs napetraka tsy misy fanampian'ny rindrambaiko ivelany. Ka avelao isika hahita ireo fomba samihafa hanamarinana sy hametrahana codec tsy hita ao amin'ny Windows 10.
Fantaro ary apetraho ireo Codec Audio & Video tsy hita ao amin'ny Windows 10
Fomba 1: Mitadiava fampahalalana Codec amin'ny fampiasana Windows Media Player
Fomba 2: Fantaro ireo Codec amin'ny alàlan'ny Codec napetraka
Mitadiava & apetraho Codec tsy hita amin'ny Windows 10
Codec Packs ho an'ny fandaharana mahazatra Video sy Audio Codec
Azonao atao ny manamarina ireo codec napetraka amin'ny alàlan'ny mpilalao media Windows fa tsy mampiasa fampiharana hafa. Mba hijerena ireo kaody napetraka ao amin'ny rafitranao amin'ny alàlan'ny mpilalao haino aman-jery Windows dia araho ireto dingana ireto.
1. Kitiho ny fanombohana Menu na tsindrio ny Kitendry Windows.
2. Karazana Windows Media mpilalao ary tsindrio hiditra hanokatra azy.
3. Press Alt + H izay hanokatra Windows Media Player Fizarana fanampiana ary avy eo tsindrio Momba ny Windows Media Player .
4.Click amin'ny Fampahalalana momba ny fanohanana ara-teknika ankehitriny eo amin'ny farany ambany ny varavarankely.
5. Misy pop up hisokatra hanontany momba ny toerana hanokafana ilay rakitra, safidio ny Internet Browser anao.
Ankehitriny, ho afaka jereo ny codecs rehetra izay misy amin'ny rafitrao anisan'izany ny horonantsary horonantsary.
Fomba 2: Fantaro ny fampiasana Codecs Codec napetraka
Installed Codec dia rindrambaiko fonosana kely tena ilaina izay mampiseho ireo codec rehetra napetraka ao amin'ny rafitranao ankehitriny. Ny Installed Codec dia fampiharana an'ny antoko fahatelo avy any Nirsoft .
1.Raha misintona ilay rakitra ianao dia esory ary kitiho indroa amin'ny InstalledCodec.exe fisie izay azonao jerena ao amin'ireo rakitra nalaina.
2.Araka ny fisokafan'ny fampiharana dia azonao atao ny mahita ny antsipiriany toy ny anaran'ny Display of Codecs, ny toe-javatra misy ankehitriny na kilemaina io na tsia, kinova fisie sns.
3.Raha te hahita ny fananan'ny Codec manokana ianao dia tsindrio fotsiny ilay izy ary mifidy Properties.
4. Ankehitriny raha te hanafoana na mamela Codec ianao dia tsindrio havanana ilay zavatra ary safidio ny fampandehanana na alefaso avy amin'ny menio manodidina ny tsindrio havanana.
Hatramin'izao dia efa niresaka momba ny fomba hahitana ireo codec napetraka ao amin'ny rafitrao izahay. Ho hitantsika izao ny fomba hahitana izay codec tsy hita ao amin'ny rafitrao ary codec inona no takiana amin'ny filalaovana karazana rakitra manokana. Ary farany, ny fomba fametrahana ny codec tsy hita ao amin'ny rafitrao. Raha te hahalala hoe codec inona no tsy eo ary codec no ilaina hilalao ilay rakitra dia mila mametraka rindrambaiko antoko fahatelo antsoina hoe VideoInspector. Ity rindrambaiko ity dia hampiseho aminao ny fampahalalana rehetra momba ny codecs, ka tsy handany fotoana ampidino eto .
Hanaraka bebe kokoa ireto dingana ireto.
1. sokafy ny videoinspector_lite.exe fisie izay vao avy nakarinao ary manohy ny fametrahana azy amin'ny fanarahana ny torolàlana an-tserasera.
2.Click Manaraka Ampidiro ny rindrambaiko.
3.Misokatra VideoInspector amin'ny alàlan'ny fanindriana ny kisary izay tsy maintsy misy eo amin'ny birao na mikaroka azy amin'ny alàlan'ny menio Start.
4. Raha hijery ireo codec napetraka ao amin'ilay rafitra dia tsindrio fotsiny Codecs avy amin'ny lafiny ankavia amin'ny varavarankely.
5. Eto no hahafahanao jereo ny audio sy horonan-tsary codecs misaraka.
6. Raha hijery ny codec izay takiana amin'ny filalaovana karazana rakitra manokana dia mila mizaha ny fampahalalana momba ny rakitra ianao ary misafidy ilay rakitra tianao hahitanao ireo codec tsy hita.
7.Raha vao nifantina ilay rakitra manokana ianao dia tsindrio Misokatra , hisokatra ny varavarankely pop-up. tsindrio ENY handroso bebe kokoa.
8.Raha vao nakarina ilay rakitra dia azonao atao ny mahita ireo kaody audio sy horonan-tsary tsirairay avy izay takiana amin'ny filalaovana ilay rakitra manokana. Azonao atao ny misintona ireo codecs mora ampiasaina amin'ny Bokotra fampidinana manolotra eo akaikin'ny codecs tsirairay avy.
9. Kitiho ny Bokotra fampidinana ary ianao dia ho alefa any amin'ny rohy ahafahanao maka ny codec tsy hita izay takiana mba hilalao ilay rakitra manokana.
10.Ny motera fikarohana misy anao dia hampiseho aminao ireo rohy hampidina ny codec tsy hita. Mila misafidy rohy mety fotsiny ianao.
11.Raha misintona ny codec ianao dia mila mametraka azy ihany koa. Ary vantany vao vita ny zava-drehetra, dia afaka milalao ilay rakitra mora foana ianao, izay teo alohan'ny tabilao mainty na olana momba ny feo.
misintona tsy tapaka amin'ny Internet ny windows 10
Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia mahita fa mandreraka ny manohy mametraka codecs indray sy indray ho an'ny karazana rakitra. Mba hisorohana an'io toe-javatra io dia azonao atao ny misintona & mametraka fonosana Codecs izay manana codec audio & video marobe takian'ireo karazana rakitra. Raha mametraka fonosana toy izany isika dia hilalao tsy misy olana ny ankamaroan'ny rakitra, na dia mety mila mametraka codec amin'ny rakitra manokana aza ianao amin'ny tranga sasany. Ireto ambany ireto ny sasany amin'ireo fonosana Codec izay hananan'ny rafitrao codecs izay takian'ireo rakitra am-peo sy horonan-tsary matetika:
Izany rehetra izany dia momba ireo codec tsy hita sy ny fomba hahitana izay codec ho an'io rakitra manokana tsy hita io, ny fomba fametrahana an'io codec io ary izay efa misy ny codec rehetra ao amin'ny rafitra.
Ka amin'ny fanarahana ireo fomba etsy ambony dia afaka mora foana ianao Fantaro ary apetraho ireo Codec Audio & Video tsy hita ao amin'ny Windows 10 . Raha mbola mitohy ny olana dia ampahafantaro ahy ao anaty boaty fanehoan-kevitra ary hiezaka aho hivoaka miaraka amin'ny vahaolana amin'ny olanao.
Tsy afaka manamarina ny sonia nomerika an'ity rakitra ity ny windows
ny fomba hivoahana ny mpanonta printy amin'ny fanjakana diso
iTunes tsy mahita iphone windows 10
windows 10 dns tsy mandeha
maninona no tsy maheno ahy i cortana
windows 10 kritika diso ny menio fanombohanao dia tsy mandeha
excel tsy mamaly rakitra save